परिवारको खुशीकै लागि मलेसिया गएका २६ वर्षिय यामको रहस्यमय निधन! – PathivaraOnline
Home > प्रवास > परिवारको खुशीकै लागि मलेसिया गएका २६ वर्षिय यामको रहस्यमय निधन!
admin February 29, 2020 प्रवास	0
काठमाडौँ । सुन्दर सपना देखेर पैसा कमाएर ल्याउने र मिठो खाने, राम्रो लाउने उदेश्यले मलेसिया हानिएका याम बहादुर बोहोराको सपना सँधैका लागी अपुरो भएको छ । रामेछाप नपा वडा नं १, निवासी गोठगाँउ निबासी याम बोहोराको र ह स्य म य निधन भएको छ । उनको र हस्य मय निधन को पछाडी बंगालीहरुको हात रहेको सूचनाका आधारमा मलेसियाको जोहोर बाहरु को देसा चेमर्लाङ्ग को ओर्किड फ्लेटका सबैजसो होस्टेल हरुमा प्रहरीले छापा मारेको बताइएको छ ।
प्रहरीले अहिलेसम्म २ जना बंगलादेशी नागरीकलाई प क्राउ गरेको भएता पनि यस विषयमा थप जानकारी भने आइसकेको छैन । २६ वर्षीय बोहोराको श व प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेको छ । उनी आफ्नो परीवार पाल्न मलेसिया भासिएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्: दुई वर्षभित्र नवलपरासीमा पाँच मोटरेबल पुल बन्दै
परासी, १३ फागुनः प्रदेश नं ५ सरकारले दुईवर्षभित्र पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न स्थानमा पाँचवटा ठूला मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने भएको छ । यसका लागि झण्डै आधा अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो । रामग्राम र सुनवल नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा बन्ने ती पुलमध्ये तीनवटाकोे शिलान्यास तयारी भएको जनाइएको छ । सुनवलको बेलारी खोला, वनकट्टी र छडेनी जोड्ने झरही खोला तथा रामग्रामको देउरवा र रामग्राम स्तूप जोड्ने झरही खोलामा पुल बन्दैछन् । यसको ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भई सकेका छन् । अन्य दुईवटा पुल पनि ठेक्का प्रक्रियामा रहेकाले चैतमा शिलान्यास हुने उहाँले बताउनुभयो ।
“वर्षांदेखि यहाँ पुल नहुँदा हामीलाई धेरै समस्या थियो, विद्यार्थी पढाइ नै छोडेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ, किनमेल तथा अन्य कामका लागि पनि वैकल्पिक लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले पुल निर्माण हुन लागेपछि यहाँ खुशियाली नै छाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । ३५ मिटर लम्बाइको उक्त पुल निर्माणका लागि भ्याटसहित रु ६ करोड ६२ लाखमा एम÷एस आसियाटिक र प्रदीप जुम्ली जेभी कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । रामग्राम नगरपालिकाकै घिनाहा र शुक्रौली जोड्ने गरी तुरिया खोलामा पनि मोटरेबल पुल निर्माण हुँँदैछ । यहाँ पुल निर्माणका लागि रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया शुरु भइसकेको जनाइएको छ ।
पुल नहुँदा बर्सातको समयमा वनकट्टी पढ्न जानुपर्ने विद्यार्थी तीन महिना पढाइबाटै वञ्चित हुनु परेको बताउँदै स्थानीयवासी लतिदुन नेसाले भन्नुभयो, “ अहिले हामी धेरै खुशी छौँ, अब यी समस्या समाधान हुने आश छ ।” प्रदेश सरकारले यसै वर्ष सुनवलको खुटहट र रामग्रामको डैनहवा जोड्ने गरी तुरिया खोलामा पनि पुल निर्माण गर्ने जनाएको छ । यो पुलका लागि पनि रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । (रासस)
धन कमाउन मलेसिया गएका १९ जवान जब काठको बाकसमा फिर्ता भए…
अमेरिकामा कोरोनाका कारण थप चारजना नेपालीभाषीको निधन